छोक सागओल दोस्तलार | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: छोक सागओल दोस्तलार ★ उषा हमाल★ प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १५, २०७१
लेखक : उषा हमाल विधा/श्रेणी : संस्मरण रचना संख्या :2प्रकाशन मिति : सोमबार, मंसिर १५, २०७१ उषा हमालका अरु रचनाहरु –
अजरबैजानमा दुई वर्ष बसेर स्वदेश फर्कियौं हामी तर अजरबैजान र अजरी मित्रहरुको सम्झना भने अझै गाढा हुँदै आइरहेछ ।
हामीले घुमेका अजरबैजानका ठाउँहरु, घुलमिल भएका मित्रहरु र रमाएका संस्कृतिहरुको सम्झना भइरहेछ बारम्बार ।
कहाँ घुमेनौं हामी !
मध्यअजरबैजानदेखि जर्जियाको सीमासम्मका सात रायोन (जिल्ला) स्यामकिर, सामुुख, एभलाख, अगस्थापा, गोरोनगोई, सहिदलार र ग्यान्जा त मुकुन्दका कार्यक्षेत्रमा पर्थे । त्यसै गरी खानलार जिल्ला मेरो अध्ययन क्षेत्र हो । यात्राको क्रममा उत्तरमा रुसको सीमा जोडिएका स्याकी, नाब्रान; पूर्वमा बाकु, सुम्गायत, खुर्दामिर, क्यास्पियन सागर र दक्षिणमा इरानसँग सीमा जोडिएको अस्तारा पनि घुमियो । पश्चिममा अर्मेनियासँग सीमा जोडिएको गुगल तालसम्म, मध्यअजरबैजानका केही जिल्लाहरु प्रिकुली, गुवा, मिङ्गेछेभेर, हाजिक्यान्त, सल्यान, बार्दा, ज्याकाताला, ग्याव्याला, ल्याङ्खेरान, आग्सु र कतिपय नाम बिर्सेका सोभियत समयका चर्चित रोप वे भएका ठाउँहरु, जहाँबाट त्यहाँका प्रशिद्ध ढुङ्गाहरु रुससम्म पुर्याइन्थ्यो, आदि छुटेनन् ।
सो यात्राले अजरबैजानको समग्र भूगोल, हावापानी र जनजीवनको साङ्गोपाङ्ग तस्बिर खिच्न मद्दत पुर्यायो मलाई ।
हामीले अजरबैजान छोड्दा त्यहाँ कुन मौसम, कस्तो रङ्ग र के माहोल थियो, सबै कुरा मैले मानसको क्यामरामा बोकेर आफूसँगै ल्याएकी छु । म जताजता जान्छु, त्यतैत्यतै हिँडिरहन्छ त्यो दृश्य ।
शक्तिशाली क्यामराभन्दा पनि सशक्त हुँदो रहेछ मानसपटलको क्यामरा । मानसले दृश्य मात्र खिच्तैन, अनुभूति खिच्छ, भावना, आकर्षण र विकर्षण पनि खिच्छ । माया, प्रेम र सद्भाव सबैसबै खिच्छ । अहिले अजरबैजानको सम्झनामा त्यही मानसको क्यामरा खुल्न पुग्छ, सबै दृश्यहरु दुरूस्त आउँछन् हृदयको आँखाभरि ।
हामी फर्कंदा अजरबैजानको समय र प्रकृति बादलको घुम्टो फ्याँकेर स्वच्छन्द बनेको थियो । प्रकृतिमा बोटबिरूवाहरु आपसमा साहुती गर्दै थिए ।
यता फर्क हरियाली, उता फर्क रङ्गिन फूलहरुको सुवास । ढुकुर र कोइलीहरु त्यसै उन्मुक्त भएर गाउँछन् । बिरालाहरु निस्किएर यताउता कुद्छन् । यो समयमा जनावरहरुसमेत मौसमको आनन्द लिन्छन् त्यहाँ ।
शान्त, सफा, प्रकृतिमय ग्यान्जामा हामी बसेको आवास क्षेत्र औधी रमाइलो थियो । सडकवरपर रोपेका रुखहरु, घरैपिच्छे अनेक प्रकारका रुखहरुले ढपक्कै ढाकेको छ त्यस ठाउँलाई । प्रत्येक घरमा सडकतर्फ केही जमिन छोडी तारबार गरेर बगैंचा बनाउने चलन छ । मौसमअनुसार ती बगैंचाहरु मन खोलेर फक्रन्छन् फलफूलहरुमा ।
अजरबैजानमा फूलको बिउ छर्ने चलन छ । हिउँदमा छरेको बिउ मौसमअनुसार उम्रेर ढकमक्क भएर फुल्छ बारीभरि— तोरीबारीजस्तै ।
फलफूल र फूलैफूलको बगैंचाबीच आधुनिक शैलीको सुन्दर घर मेरो सम्झनामा सधैं ताजा छ— कार्यालयबाट पायक पर्ने ठाउँ, सौहार्द र मायालु छिमेकीहरु । ढुकुरहरु हाम्रा छेउमै लुटपुटिन आउँथे र आँगनभरि खेल्थे । हामी उनीहरुलाई चामल खुवाउँथ्यौं चारोका लागि । चारो टिपेर खुसीले मखलेल तिनीहरु रुखका हाँगाबाट हाम्रा लागि मीठो स्वरमा गीत गाइदिन्थे— ढुकुरकुरकुर ।
अजरबैजानमा धेरै बिराला पाल्ने चलन छ । ती पनि विविध थरी, जाति र रङ्गका— सेता, काला, छिरबिरे, पहेंला, बाघटाटे । हाम्रो आँगनमा धेरै थरी बिरालाहरु खेल्न आउँथे, हामीसँग लुटपुटिन्थे र खान माग्थे । दूधभात दिने गथ्र्यौं हामी तिनीहरुलाई । बगैंचामा यताउति लुक्तै प्रेम क्रीडामा व्यस्त ती बिरालाहरु एकअर्कालाई देखाउँदै मरीमरी हाँस्थ्यौं र समयसँगै प्रकृतिको त्यो अनुपम सिर्जनामा आह्लादित हुँदै रमाउने गथ्र्यौं ।
हामी बसेको घर साँच्चै नै प्रकृतिमय थियो ।
म सम्झिरहन्छु— सन् २००४, अप्रिलको दोस्रो सातातिरको कुरा होला । म बाकुबाट जर्जियाका लागि मुकुन्दलाई बिदा गरेर ग्यान्जा फर्कंदै थिएँ । साथमा साला थियो, गाडी चलाउँदै । पहाडी बाटो कुहिरोले टम्म छोपिएर दृश्य क्षमता एकदमै कम थियो भने जाडो पनि बढिरहेको थियो ।
म एक्लोपनमा कुहिरोभित्र हराइरहेकी थिएँ । आफ्नो देश र आफन्त सम्झेर संवेदनशील भइरहेको मनमा ती पहाडहरुले नेपाल सम्झाए । कुहिरोले अँध्यारो पारेका बेला मन्द गतिमा गाडी चलाइरहेको थियो साला ।
चिसोले कक्रिएको शरीरमा भएका लुगाहरुले जाडो थेगेका थिएनन् । जाडो गइसकेको ठानेर बाक्लो लुगा लगाएकी पनि थिइनँ । सालाले हिटर अन गर्यो । ‘यहाँको चिसोको के ठेगान ?’ म झन्झन् गुपचुप र संवेदनशील हुँदै गएकी थिएँ ।
सालाले एउटा पेट्रोल पम्पमा गाडी रोक्यो । मैले त्यहीँ ब्यागबाट न्यानो कपडा झिकेर लगाएँ । हामीे पेट्रोल पम्पमा भएको रेस्टुराँमा खाना खान बस्यौं तर प्याज र बोकाको मासु सँगै राखेर पकाएको खाना मैले राम्ररी खान सकिनँ ।
सालाले रुसी भाषामा भन्यो— “तिब्या प्लोखा दा उषा” (तँलाई नराम्रो भयो हगि उषा) ।
मैले भनें— “निक्षिबो साला” (केही नराम्रो भएको छैन साला) । उसले “ती गलोद्नी” (तँ भोकै छस्) भन्दै पैसा पनि तिर्न दिएन मलाई ।
मुकुन्दको अनुपस्थिति महसुस गरिरहेकी मलाई हेरविचारमा कति सचेत थियो साला !
अहिले मलाई अजरी भाषामै भन्न मन लागेको छ सालालाई— छोक सागओल गारदास ! (धेरै धन्यवाद छ भाइ) तैंले धेरैधेरै माया दिइस् । छोक सागओल रविना आमा ! तिमीले हामीलाई ममता दियौ । छोक सागओल क्यामेला ! तेरो योगदान मैले बिर्सेकी छैन । छोक सागओल जुल्फिया र सैमुर, म तिमीहरुको मित्रतालाई कहिल्यै बिर्सन सक्तिनँ ।
यसरी नै मलाई सबै अजरी साथीहरुलाई भन्न मन लागेको छ— छोक सागओल दोस्तलार ! (धेरै धन्यवाद छ साथिहरु) तिमीहरुले हाम्रो अजरबैजान बसाइलाई सुन्दर बनाइदियौ ।
हामीले अजरी शब्दहरु बोल्दा उनीहरु धेरै रमाएका दृश्यहरुको सम्झना छ मलाई । हामीले अजरी भाषाका केही मात्र शब्दहरु सिकेका थियौं र सन्दर्भ मिलाएर तिनै शब्दहरुको अत्यधिक प्रयोग गर्दै उनीहरुसँग गफिने प्रयास गथ्र्यौं ।
त्यहाँको चलनअनुसार उनीहरुलाई भेट्ता हामी नातारस्याना (तिमीलाई कस्तो छ) ? भन्थ्यौं । उनीहरु रमाउँदै जबाफ दिन्थे— याक्सी (ठीक छु) । अझै रमाइलोमा हामी भन्थ्यौं— म्यान अजरबैजान छोक सेबि¥याम (म अजरबैजानलाई धेरै माया गर्छु) । उनीहरु खुसीले टेबल ठटाउँदै याला, याला (धेरै राम्रो, धेरै राम्रो) भन्दै कराउँथे ।
हामी फर्केको केही समयपछि क्यामेलाको पनि खबर आयो— अब उसका लागि त्यहाँ रोजगारी छैन । उसकी छोरीको कुनै भविष्य छैन । क्यामेलाले पाउने त्यही सरकारी वृद्धभत्तामा उनीहरु बाँचिरहेका छन् । महँगी चौपट्टै बढेको छ । क्यामेलाहरुको जीवन अझ कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । महँगी र कष्टप्रद जीवनले यो पुस्ताका मानिसहरुलाई अझ बढी धकेलिरहेछ पूर्व साम्यवादी सासन ब्यवस्थाको अतीतमोहतिर ।
केही समयपछि जुल्फियाको पत्र आयो— उसकी आमाको निधन भएछ । साम्यवादी शासनमा एउटा विशाल छापाखानाकी प्रबन्धकको मृत्यु औषधीको अभावमा भयो । जुल्फिया काम खोज्न बाकुतिर भौतारिँदै छ । उसमा साम्यवादी व्यवस्थाका सहज दिनको सम्झना र अहिलेका चुनौतीहरुसँग जुध्नुपर्छ भन्ने स्वीकारोक्ति एकै पटक प्रकट भएको छ । हुन त यो पुस्ता राजनीतिक व्यवस्थाका राम्रा–नराम्रा पक्ष विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छ तर यिनीहरुका लागि जीविकोपार्जन नै सङ्र्घषमय छ ।
कहिले साम्यवादी शासनका निश्चिन्त दिनहरु सम्झदै अतीतमा रमाउनु त कहिले त्यही विगतको व्यवस्थाले कुनै न कुनै दिन आपूmहरुलाई खाडलमा पछारेर भाग्ने नै थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु र परिवर्तित सन्दर्भसँग समाहित हुन सङ्घर्ष गर्नु— आखिर यो पुस्ताको नियति नै त भयो बाध्यताको ।
अजरबैजानबाट एउटा इमेल आयो । मुकुन्दको जन्मदिनको अवसरमा आएको इमेलमा लेखिएको छ— तिमीहरुको प्रगति र सुखद जीवनको कामना गर्दै हामीले यहाँ तिम्रो जन्मदिन भव्य रुपले मनायौं ।
आश्चर्य लाग्यो— संसारमा यस्ता मानिसहरु पनि हुँदा रहेछन् । यति आत्मीय र यति आदरणीय, जो हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि हामीलाई यति धेरै माया गर्छन् ।
अजरी परम्परामा जन्मदिन मनाउने आफ्नै विशेष तरिका छ । हुन त उनीहरु पनि पार्टी आयोजना गरेर केक काट्छन् तर फरक के भने उनीहरु औपचारिक पार्टी सुरू भएको घोषणा गर्छन् अनि पेय पदार्थका गिलास हातमा लिएर सबै उभिन्छन् र उद्घोषकको निर्देशनअनुसार पालैपालो शुभकामना मन्तव्य राख्छन् ।
प्रत्येकको मन्तव्य सकिएपिच्छे उनीहरु पेय पदार्थका गिलासहरु ठोकाएर ‘सागओल’ भन्दै चियर्स (त्यहाँ सागओलको अर्थ चियर्स पनि हुन्छ) गर्छन् ।
त्यसपछि समारोहमा रौनक थप्तै प्रचलित अजरी लोकबाजाको धुन बज्छ र उनीहरु स्वतःस्पूmर्त सामूहिक नृत्य गर्छन् । यो नृत्य जन्मदिनमा मात्र होइन, सबै शुभअवसरहरुमा गरिन्छ ।
अजरी मित्रहरुले हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि यसरी अर्थपूर्ण र रमाइलो तरिकाले जन्मदिन मनाएको खबर पढ्दा हामीलाई भएको सुखद अनुभूति व्यक्त गर्ने शब्दहरु मसँग छैनन् । सायद यही ‘शब्द नहुनु’ नै पो अनुभूतिको जीवन्त व्याख्या हो कि !
अहिले महसुस गर्दै छु— संसारभरिका मानिसहरुमा ‘आत्मीयता’ नामको एउटा अनौठो साझापन हुँदो रहेछ, यद्यपि प्रत्येकमा मात्रात्मक रुप फरक होला । समय, परिस्थिति र संस्कारका कारण अभिव्यक्ति फरक हुन सक्ला । तर प्रत्येकमा रहेको यो साझा आत्मीयताको सम्बन्ध पहिल्याउँदा संसारभरिका कुनै पनि मानिस आफ्नै हुन सक्ता रहेछन् । भाषा, वर्ण, जाति र राष्ट्रियताको सीमाले अलग बनाउन सक्तो रहेनछ मान्छेहरुलाई ।
यी त भए सम्झनाका कुरा । आफू रमाएका र अरुले रमाइलो गरेका कुरा । नयाँ अनुभवका कुरा र जानकारीका कुरा । तर कुरा रामरमाइलोका मात्र हुँदैनन्, खुसी र मनोरञ्जनका मात्र पनि हुँदैनन् । त्यसो हुँदो हो त जीवनको क्यानभासमा आरोहकै मात्र रङ्ग चढ्दो हो— कहिल्यै फिका नहुने गरी । जीवनको क्यानभासमा उज्यालो रङ्ग मात्र भइरहँदो हो— कहिल्यै नधमिलिने गरी ।
अजरबैजानमा मैले अनेक नियति भोगिरहेका फरकफरक पुस्ताहरु भेटें । उनीहरुका फरक सोचाइ र फरक दिनचर्याहरु देखें । जीवन जिउने फरक दृष्टिकोण र फरक दर्शन बुझेँ । शासन व्यवस्थाले खण्डित पारेका फरक कालखण्ड देखें । मौलिक संस्कृति र आफ्नोपन भेट्न तड्पिएका मनहरु भेटें । जीवन यापनको मुस्किलमा छटपटाउँदै गुमेका दिनहरु सम्झिरहेको पुस्ता देखें । परिवर्तन स्वीकार गर्दै पाइला चाल्न खोजिरहेका सङ्र्षशील पौरखीहरु देखें । समग्रमा विगत र वर्तमानबीच ठूलो खाडल देखें ।
अजरी इतिहासको यो कालखण्ड शीघ्र परिवर्तनकोे अवस्था हो, जसको असर यत्रतत्र परिरहेछ । यो असरले देशका हरेक तप्कालाई छोइरहेको अवस्था हो— जनजीवन उलटपुलट बनाएको अवस्था, मानिसहरुको जीवनस्तर अधोगतितर्फ धकेलिइरहेको अवस्था ।
मौलिक संस्कृतिको पुनर्जागरण र आफ्नो भाषाको पुनरूत्थानसँगै आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयासको पहिलो पाइलो टेकिरहेको अवस्था हो यो । देशले स्वतन्त्रता र स्वपरिचय बनाइरहेको अवस्था, देश र जनतामा ‘आफ्नो उत्थान आपैm गर्नुपर्छ’ भन्ने जाँगर देखिन थालेको अवस्था हो । समग्रमा यो समय दिवास्वप्नबाट ब्युँझिएको जाग्रत अवस्था हो ।
अजरबैजानले यस्तै अनुभव दियो मलाई । कुनै सुनेको र पढेको सिद्धान्तभन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी भयो ममा अजरबैजानसँगको साक्षात्कार । मैले त्यहाँको परिवर्तनबारे अध्ययन गरें, जनजीवनलाई मनले छोएँ; त्यहाँको इतिहासलाई विचारले जाँचें र वर्तमानलाई हृदयले छामें । सुनेको कुरा गलत हुन सक्ला तर देखेको कुरा यथार्थ हुन्छ ।
अजरबैजानलाई मैले आँखाले देखें र मनले अनुभूत गरें ।
त्यहाँको पूर्व साम्यवादी शासन व्यवस्थाले जनजीवनमा छोडेको प्रभाव मेरो आँखाले खोजेको कुरा भयो । किनभने मलाई हेर्नु थियो— जुन व्यवस्था ल्याउन हाम्रो देशमा यति ठूलो रणसङ्ग्राम चलेको छ, त्यस्तो व्यवस्थाले हामीलाई के दिनेवाला छ र हामीबाट के लिनेवाला छ । त्यही पक्षमा चनाखो भइरहें म अजरबैजान बसाइ अवधिभरि ।
यी यावत् कुराहरुलाई थाती राखेर, फेरि एक पटक मलाई यहीँबाट अजरबैजान र अजरी मित्रहरुलाई उनीहरुकै भाषामा धन्यवाद पठाउन मन लाग्यो— छोक सागओल दोस्तलार ! छोक सागओल अजरबैजान !
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : संस्मरण: खिच्न नसकेको फोटो हनी पफ संस्मरण : युद्दभूमी इराकको यात्रा मध्यरातमा चौराह देखि क्याम्पसचोकसम्म छालमा रुझेकी उ नाब्रानमा गर्मी याम – सागओल अजरबैजान मेरो प्यारो ओखलढुंगा सम्झनामा मेरा अग्रज,गाँउ,स्कुल र बालसखा नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com